Everestmission | हरपल खबर, निष्पक्ष विश्लेषण सरकारको विज्ञप्ति र संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको निर्णय
सरकारको विज्ञप्ति र संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको निर्णय
देशमा संस्थागत विद्यालयको बारेमा उचित निर्णय र नियमन नहुँदा अहिले यसको छाता सङ्गठन प्याब्सन र एनप्याब्सनले सम्पूर्ण विद्यालयहरूबाट सञ्चालन भइरहेको वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ कार्यक्रम बन्द गरी शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिएको घोषणा गरेर बसेको छ । यसले सम्पूर्ण विद्यार्थी त छदै छन् त्यसमा काम गर्ने अढाई लाख शिक्षक कर्मचारी अनि उनीहरूको परिवारको विचल्ली भएको छ । तर सरकार यी व्यक्तिहरूप्रति कुनै उत्तरदायित्व बहन गर्न तयार देखिँदैन ।
देशमा सञ्चालन भएका सम्पूर्ण नीजि कम्पनी तथा संस्थाहरूलाई एउटा निश्चित नियममा राखेर लगाम लगाउन सरकार असफल हुँदै आएको छ । त्यसैले यो सरकार सबै स्तरका विद्यालयहरूलाई अहिले एउटै डालीमा हालेर व्यवहार गरिरहेको छ । “नीजि विद्यालयले ब्रम्हलुट गरेको छ” भन्ने आम मान्छेको बुझाइलाई प्रमाणित गर्ने दुस्प्रयास गरिरहेको छ । जसका कारण योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमा अहिले अनगिन्ती प्रश्न उब्जिएका छन् । अभिभावकमाथि ब्रम्हलुट गर्ने, विद्यार्थीलाई दिइने सुविधाभन्दा बढी अनावश्यक शुल्क असुल्ने विद्यालयहरू पनि नभएका होइनन् तर यी विद्यालयलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही किन हुँदैन ? जहाँ बढी शुल्क असुली हुन्छ त्यहीँ विद्यार्थीको चाप बढी किन हुन्छ ? त्यो विद्यालयमा विद्यार्थीले पाउने शिक्षा के हो ? पाउने सेवा सुविधा के हो ? कुन स्तरको छ भनेर अनुगमन हुन्छ कि हुँदैन ? विद्यार्थी अभिभावकबाट लिइएको शुल्कका तुलनामा शिक्षकलाई तलब भत्ता दिइएको छैन, त्यो विद्यालयलाई अनुसन्धानको दायरामा किन राखिएन ? शिक्षा नियमावली, नीजि विद्यालयको मापदण्ड निर्देशिका पालना नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही भएको छ कि छैन ? यो कानुनी राज्यमा कुनै कानुनको पालना नगरी सञ्चालन भएका विद्यालय बन्द किन गरिएन ? यसमा जोडिएका आया, पाले, ड्राइभर, विद्यार्थी शिक्षक अभिभावक नेपालकै नागरिक होइनन् र ? यिनीहरूको संरक्षण सरकारको दायित्वभित्र पर्छ कि पर्दैन ? विद्यालय सञ्चालकसँग समन्वय गरेर यहाँका सम्बन्धित सबैको समस्या समाधान गर्नु पर्ने यो सङ्कटको बेलामा विद्यालय सरकारीकरण गर्ने उचित समय देख्ने सरकार र विद्वान् वर्गहरूको आफ्ना छोराछोरी पनि पक्कै संस्थागत विद्यालयमै पढेको हुनु पर्छ यसमा कुनै द्विविधा छैन । जनताले तिरेको करको खरबौँ रुपिँया लगानीमा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयहरूले विद्यार्थी अभिभावकको विश्वास जित्न किन सकेन ? नेपालमा आमूल परिवर्तन भएको यत्तिका समयसम्म यसमा सम्बन्धित सबै पक्ष किन मौन रह्यो ? संस्थागत विद्यालयको आवश्यकता महसुस गरेर खोल्ने अनुमति दिएपछि निरन्तर अनुगमन र निर्देशन किन भएन ? आवश्यकता नै थिएन वा यसको कुनै योगदान देशमा रहँदैन थियो भने योभन्दा अगाडि नै किन बन्द गरिएन ? अनावश्यक शुल्क बढी असुल्ने विद्यालयको कारण त अभिभावक पनि मारमा परेका छन्, यो कुरा समयमै किन दखिएन ? यही सङ्कटको समयमा सरकारीकरण गर्ने उचित समय देख्नुको कारण के हो ? बैङ्क लोन लिएर व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार सबैलाई छुट छ । शिक्षा सेवा हो तर यो व्यापार पनि हो । अभिभावकले शुल्क नतिरे कर्मचारीको तलब दिन सक्दैन भन्ने कुरा किन बुझिएन ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरू अहिले उब्जिएका प्रश्नहरू हुन् ।
संस्थागत विद्यालयको बारेमा जेजस्तै टिका टिप्पणी भए पनि यथार्थमा देशमा शिक्षा क्षेत्रमा यसको योगदान उल्लेखनीय नै छ । योग्यताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली नेपालमा छैन । जुन मापन प्रणाली छ, त्यसमा राम्रो नतिजा देखाउन सफल विद्यालयहरूले विद्यार्थी कुल्ली काम गर्न विदेश पठाएको मात्र होइन, प्राविधिक लगायत विभिन्न विषयमा राम्रा र दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न पनि सफल भएका छन् । यो तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको कुरा हो । आजको यो विश्वव्यापीकरणको समयमा संसारमा बिक्ने नागरिक यहीँबाट उत्पादन भएका छन् । अभिभावकले आफ्नो इच्छा र आर्थिक हैसियतका आधारमा विद्यालय छनोट गर्ने अवसर यी विद्यालयहरूले नै प्रदान गरेका छन् । विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर शिक्षासँग, विद्यार्थी बालबालिकासँग सम्बन्धित अन्य सम्पूर्ण सुबिधाहरू उपलब्ध गराएर सञ्चालन भएका विद्यालयले त्यस्तो के अपराध गरेको छ ? जसमाथि अहिले सिङ्गो सरकार लगायत विद्वान् वर्ग सौतेनी व्यवहार गर्न पछि परेकका छैनन् । निजी विद्यालयहरूले अभिभावकहरूबाट पैसा उठाएर उनीहरूकै नानी बाबुहरूको शिक्षाका लागि लगानी गरेका छन् । उनीहरूकै पैसाबाट आया, पाले, ड्राइभर, शिक्षक र कर्मचारीलाई रोजगार दिएका छन् । यी व्यक्तिसँग सम्बन्धित परिवारको हातमुख जोड्ने अवसर दिएका छन् । त्यहीँ अभिभावकको पैसाबाट कर बुझाएर देशको राजस्व सङ्कलनमा ठूलो मद्दत पुगेको छ । त्यति मात्र होइन बैङ्कबाट ऋण लिएर सञ्चालन भएको संस्थाहरूले बैङ्को व्याज तिरेर बैङ्क सञ्चालन गर्नमा पनि ठूलो मद्दत गरेको छ ।
विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक कर्मचारीहरू संस्थाका मेरुदण्ड हुन् । यिनीहरूको संरक्षण संस्थाले नै गर्नु पर्दछ । तर अभिभावकहरूले तिरेको पैसाबाट चल्ने संस्थाले त्यो बाटो बन्द भएपछि त्यसो गर्न सक्दैनन् । अपवाद बाहेक केही विद्यालयहरू बाहेक धेरै सञ्चालकहरूले भैपरी आउने समस्या समाधानका लागि कोश तयार गरेर राख्न सकेका छैनन् । यदि त्यसो गर्न सकेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन । किनकि बैङ्क लोन, तलब, भत्तामा खर्च र जेजति आम्दानी भयो त्यो सबै आफ्नै भौतिक पूर्वाधार र स्तरोन्नतिमा खर्च गर्दै प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । किनभने प्रत्येक टोलमा विद्यालय सञ्चालन गर्न स्वीकृत पाएपछि विद्यालय खोलेर रोजगार उपलब्ध गर्ने आँट कसेका विद्यालयहरूले विद्यार्थी आकर्षणका लागि हरेक उपाय अपनाउनु परेको छ । विद्यार्थीकै सुबिधाका लागि खर्च गर्नु परेको छ । किनभने उनीहरूकै छनोट र रुचीअनुसार विद्यालय भर्ना हुने चलन छ । त्यसो भएर पनि धेरै निजी विद्यालयहरूले भैपरी आउने कोश निर्माण गर्न नसकेको कुरालाई हामीले भुल्न हुँदैन । अहिले सरकारले स्वरोजगार कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । नयाँ रोजगार सिर्जनाका कार्यक्रमहरू ल्याउने योजनाको तयारीमा छ । तर व्यक्तिगत लगानीमा स्थापना भएका विद्यालयहरूप्रति सरकार सारै गैर जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको छ ।
यो सङ्कटको बेलामा सम्बन्धित नियमन निकाय त गैर जिम्मेवार भयो नै तर यहाँ शिक्षासँग जिम्मेवार व्यक्तिहरू, शिक्षाबिद्हरू, विद्वान्हरू पनि बोलिरहेका छन् ता कि “यही नै हो राम्रो मौका संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने” । आम सम्बन्धित व्यक्तिहरूले बुझ्नु पर्ने कुरा अब सरकारीकरण नै समस्याको समाधान हो त ? सरकारीकरणले यससँग सम्बन्धित (सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र विद्यार्थी) सबैको समस्या समाधान हुन सक्छ ? हुन सक्छ भने तुरुन्तै बन्दको घोषणा गरौँ । यहाँ संलग्न सञ्चालक, शिक्षक, विद्यार्थी र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरौँ । होइन भने देशमा भएको यो विपत्तिको बेलामा अनियन्त्रितलाई नियन्त्रण गर्दै विद्यालय निर्देशिकाको पालना गर्दै सञ्चालन गर्न दबाव दिदै शिक्षा मन्त्रालय सबैको अभिभावक बन्नु पर्ने होइन र ? यी व्यक्तिले शिक्षा मन्त्रालय र संस्थापकको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न पर्ने होइन र ? पाँच महिनादेखि तलब नपाएर डिप्रेशनमा पुग्न लागेका शिक्षक कर्मचारीको लागि राहत होइन आहत हुने किसिमको शिक्षाबिद्हरूको बिचार कस्तो बिचार हो ? देशको राजनीतिमा भएको आमूल परिवर्तनले पनि अनियमितता, कमिशन, भ्रष्टचार, नाताबाद, क्रिपाबाद जस्ता विकृुति र विसङगति हटाउन सकेको छैन । देशका लाखौँ युवा दिनप्रतिदिन विदेसिएका छन् । अहिलेको सरकारले स्वदेशमै ठूलो रोजगारीको व्यवस्था गरी रोजी रोटीका निम्ति युवा यहीँ रोक्ने र विदेसिएका नेपालीलाई पनि फर्काउने उद्घोष गरिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा संस्थागत विद्यालयहरूको घाँटी रेटेर यससँग सम्बन्धित झन्डै अढाइ लाख शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजीरोटी खोस्ने आँट गरिरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने भन्ने आशयबाट प्रमाणित हुँदै छ ।
अब यी सबै समस्याको सामाधन संस्थागत विद्यालयलाई सरकारीकरण गर्ने नै हो भने त्यसमा सबैको समर्थन रहने नै छ । किनभने शिक्षा र स्वास्थ्य निशुल्क गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कुनै पनि अभिभावकको बालबालिकाले गुणस्तर शिक्षा पाउँछन् भने सबैले यो कदमलाई स्वीकार नगर्ने कुरै हुँदैन । तर यो देशका कतिपय विद्वान् महोदयहरूको भनाइहरू सुन्दा पूर्वाग्रही ढङ्गले प्रस्तुत भएको महसुुस हुन्छ ।
कोरोना महामारीजस्तो जस्तोसुकै समस्याहरूले समस्या उतपन्न गराए पनि लकडाउनको समयमा बैशाख महिनादेखि नै संस्थागत विद्यालयहरूले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्दै आइरहेका थिए । असार महिनाबाट सरकारले पनि उक्त कार्यक्रम सञ्चालनका लागि निर्देशन जारी ग¥यो । सोही निर्देशनले कक्षा सञ्चालनमा मद्दत पुग्यो । यो कक्षा सञ्चालन गरेबापत थोरै शुल्क उठाएर शिक्षक कर्मचारीको चुलो मात्र बाल्ने कोसिस गर्ने विद्यालयको प्रयासलाई राहत पुग्योे । तर सरकारको तर्फबाट भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन नभई कुनै किसिमका शुल्क उठाउन पाइने छैन भनेर विज्ञाप्ती जारी ग¥यो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीको पठनपाठनमा धोका त भयो नै यससँग सम्बन्धित धेरै व्यक्तिहरूकोे रोजीरोटी खोस्ने काम भयो । यस्तो अवस्थामा अब दुईवटा विकल्प छन्, पहिलो कुरा आँट छ भने संस्थापकहरूले सरकारलाई चाबी बुझाउनु पर्छ र सबै जिम्मेवारी सरकारले लिनु पर्छ । दोस्रो कुरा जसरी पनि सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल बहस वा समन्वय गरेर अभिभावकसँग शुल्क लिने, कक्षा सञ्चालन गर्ने र शिक्षक कर्मचारीहरूको समस्या हल गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्नु पर्दछ । नत्र समस्या झन झन विकराल बन्दै जाने निश्चित छ ।
काठमाडौँ, १२ मंसिर । थप १७ सय ३ जनामा कोरोना (कोभिड-१९) संक्रमण भएसगै नेपालमा संक्रमितको संख्या २ लाख २९ हजार
संसदको नियमित अधिवेशन अब सुरु हुन्छ : मन्त्री तुम्बाहाङ्फे
काठमाडौँ, १२ मंसिर । कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संघीय संसदको नियमित अधिवेशन अब सुरु हुने बताएकी छन् । आज काठमाडौँमा आयोजित
काठमाडौँ, १२ मंसिर । आफ्नै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) निर्माण गर्न चीन सरकार
प्रम ओलीको मोदीलाई सन्देशः हामी कसैको कार्ड होइनौं, प्रमाणका आधारमा सीमा समस्या समाधान गरौं
काठमाडौँ, ११ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई ऐतिहासिक प्रमाण तथा तथ्यको आधारमा सीमा समस्या तत्काल